Hodan Xasan oo u tartamaysa Xildhibaannimada xaafadda 62A ee Minneapolis | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Hodan Xasan oo u tartamaysa Xildhibaannimada xaafadda 62A ee Minneapolis
Hodan Xasan oo u tartamaysa Xildhibaannimada xaafadda 62A ee Minneapolis
USA-(SNTV)-Boqolaal Soomaali ah ayaa ka qeybgashay xaflad lagu soo dhaweynayay Hodan Xasan, oo u tartamaysa Golaha degaanka Xaafada 62A ee Minneaplis.
Xafladdan oo ka dhacday Magaalada Columbus Ohio,ayay ujeeddadiisu in Hodan loo muujiyo in ay tahay Qof u qalma xilka ay u tartamayso isla markaana ay buuxin karto kaalin muhiim ah oo Haweenka Soomaaliyeed iyo horumarkooda ka tarjumaysa.
Inkastoo Xaafadda ay odan u ordayso deggan yihiin Dadyow kala geddisan haddana waxay si weyn ugu baahan tahay murashaxnimadeeda inay u hesho taageero kaga timmaaddo Jaaliyaddeeda.
Hodan Xasan oo ay tartanka kula jiraan Murashixiin kale oo Laba ka mid ihi ay Soomaali yihiin, ayaa waxaa sidoo kale ordaya Ajaaniib, waxanay Hodan sheegtay inay ka go’an tahay inay Kursigaasi ku guuleysato Soomaali.
Qaybaha kala duwan ee Bulshada Soomaaliyeed eek u dhaqan Columbus ayaa si weyn usoo dhoweeyay Murashaxnimada Hodan, waxanay si weyn ugu boorriyeen inay sii Laba laabto dedaalkeeda.
Hodan Xasan ayaa Jaaliyadda kala hadashay in ay Reer Ohio ahmiyadda siiyaan dhallinyarada,isla markaana ay ka hor tagaan dilalka ka dhex dhaca Dhallin yarada Soomaaliyeed oo xiilliyadan dambe ku kordhayay Columbus.
Murashax Hodan ayaa ballan qaadday inay haddii ay tartanka kusoo baxdo ay wax badan ka qaban doonto baahiyaha asaasiga ee Soomaalida ku nool Columbus, waxanay codsatay in si taasi loo gaaro ay taageeradooda iyo dhaqaalahooduba la Garab istaagaan.
Deeqo Shire (SONNA) Columbus/ Ohio
Previous articleKu simaha Madaxweynaha oo si rasmi ah u daah furay Shirweynaha Qaran ee Dastuurka
Next articleDowladda Shiinaha oo $1.5 Malyan ugu deeqday Dowladda Soomaaliya